चौध करोडको लगानीमा ह्याचरी सञ्चालन — Arthatantra.com
Arthatantra.com > कृषि > चौध करोडको लगानीमा ह्याचरी सञ्चालन
चौध करोडको लगानीमा ह्याचरी सञ्चालन
झापा । ब्रोइलर जातको कुखुराका चल्ला उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ह्याचरी सञ्चालनमा आएको छ । मेची अञ्चलमै पहिलो पटक रु १४ करोडको लगानीमा ‘भाटभटेनी इन्टरनेशनल ह्याचरी प्रालि’ सञ्चालनमा आएको हो । चारजनाको संयुक्त लगानीमा ह्याचरी सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालक भरत ओडारीले जानकारी दिए ।
झापासहित इलाम, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, मोरङ, सुनसरीलगायत जिल्लाका किसानलाई लक्ष्य गरी ह्याचरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । बिर्तामोड–२ स्थित वीर अमरसिंह माविको चार बिगाह दुई कट्ठा जग्गा भाडामा लिएर फार्म सञ्चालन गरिएको छ । त्यहाँदेखि करीब ३०० मिटर टाढा कनकाई–८ मा ह्याचरीको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको एक बिगाह ११ कट्ठा जग्गामा चल्ला उत्पादन गर्ने मेसिनसहितको भौतिक संरचना तयार गरिएको अर्का सञ्चालक तारा प्रसाईंले बताए ।
“विद्यालयको जग्गा रु ८० हजार वार्षिक भाडा बुझाउने गरी २१ वर्षका लागि लिजमा लिका छौँ,” उनले भने । तीन–तीन वर्षमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने सहमति भएको छ । हाल यहाँबाट हप्तामा ११ हजार कुखुराका चल्ला उत्पादन हुँदै आएको छ ।
ह्याचरी पूर्णरुपमा सञ्चालमा आएपछि हप्तामा ६० हजार चल्ला उत्पादन गर्न सकिने अर्का सञ्चालक निर्जा सिवाकोटीले बताए । क्षमता विस्तारका लागि थप तीन बिगाह १७ कट्ठा जग्गा खरिद गरिएको छ । हाल अण्डा पार्ने ‘प्यारेन्स’ कुखुराको एक दिने चल्ला मलेसियाबाट आयात हुने गरेको छ । ‘कब ५००’ जातको उक्त कुखुराको चल्ला ह्याचरीसम्म ल्याउन करीब साढे छ डलर खर्च हुने सञ्चालक सिवाकोटी बताउँछन् ।
२०७५ बैशाख २७ गते प्रकाशित
२०७५ वैशाख २७ गते १४:२१ मा प्रकाशित
वोमी माइक्रोफाइनान्सको ३० प्रतिशत हकप्रद आउने, कसले दिने आवेदन ?
कर्मचारीले पाउने महंगी र स्थानीयबाहेक सबै भत्ता खारेज
नेपालको आर्थिक विकासमा चीनको सहयोग महत्वपूर्ण – पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
बैशाख १ गतेबाट संयुक्त कारोवारको तयारीसहित गाभिँदै यी दुई वित्तिय संस्था
बिधार्थी नेताहरु हुनेभो स्ववियु निर्वाचनःकार्यतालिका यस्तो छ !
‘लाइसेन्स’ परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशित
साउनामा नुहाउन गएका पूर्वमन्त्रीका पीए दम्पतीको निस्सासिएर मृत्यु